बाढी अपडेटः भोजपुरमा बाढीले बगाएर गम्भिर घाइते भएकाहरुको उपचार हुँदै — KhabarTweet
बाढी अपडेटः भोजपुरमा बाढीले बगाएर गम्भिर घाइते भएकाहरुको उपचार हुँदै
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १३, २०७७ समय: १३:३२:१७
दिङ्ला– भोजपुरमा अविरल बर्षाका कारण आज बिहान आएको बाढीले एक घर बगाउँदा गम्भिर घाईते भएका तिन जनाको उपचार भईरहेको छ । उनिहरुको दिङ्ला स्थित षडानन्द फार्मेसिमा प्राथमिक उपचार भईरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय दिङ्लाले जनाएको छ । घाईतेहरुलाई थप उपचारको लागि हेलिकोप्टर मार्फत धरान पठाउने तयारी भईरहेको समेत कार्यालयले जनाएको छ ।
बिहान करिब ६ तिर आएको वाछा खोलाको बाढीले षडानन्द नगरपालका वडा नं. ४ घलेगाउँ निवासी बर्ष २४ को अमृत (तुकराज) घलेको घर बगाउँदा उनको श्रीमती बर्ष २० की अलिसा घले साथै ढेड बर्षकी छोरी आयुष्मा घलेलाई बगाएको हो । उनिहरु ३ जनालाई करिब ५० मिटर तल अलैंचि बारीमा पुरिएको अवस्थामा भेटिएर उद्धार गरिएको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष किशान राईले बताए ।
उनिहरु षडानन्द नगरपालिका वडा नं. ४ स्थाई बसोवास भएका र चिर्खुवा हाईड्रो पावरको क्याम्प भएको स्थानमा पसल गरेर वस्दै आएका थिए । बाढीले बगाउँदा करिब एक लाख पचास हजार बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बुझिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
भोजपुरमा १४ बर्षिय बालक माथि खुकुरी प्रहार - 7,927 views